JINGHPAW KASA: မျိုးချစ်ရဲဘော (၃) ဦးကျဆုံး
မျိုးချစ်ရဲဘော (၃) ဦးကျဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ မော်မောဘွမ်း သို့ ဖားကန့် ဗျူဟာကုန်းတွင်နေရာယူထားသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ အောက်တိုဘာ (၁၇) ရက် ည (၉း၀၀ မှ ၁၀း၀၀) နာရီအတွင် လက်နက်ကြီးများဖြင့် အချက် (၂၀) ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော် (၃) နှင့် အရပ်သား (၃) ဦးကျဆုံးသွားကြောင်း ဆက်လက်သတင်းရရှိပါသည်။
There were (3) Kachin patriotic soldiers and (3) civilians died at Maw Mau mountain, which is under KIA (6) battalion, KIA (2nd) brigade, western Kachin state, according to the KIA front-line report. The brutal Government troops from Hpa Kant military tactic mountain fired more than (20) with heavy artillery weapon to the KIA (6) battalion’s region of Maw Mau mountain.
Haveapeace in heaven,,,
You are so tired,,,
You gives you best to our Kachin, so called Rawang, Jingpaw, Lawng Waw, Zai Wa, La Shi & Li Su.., not to disappear from the Kachin Land, and the world.
Thank you so much for your lives for us.....
You all are very special....
And you all are very dutiful not only for the present but also for the future...
I give my respect to all of you...
And i salute you...
And i promise to help in someways the rest of your families....
You all are freedom fighter...
You all are rebellions from the sight of cruel and liar Burmese government...
But you all are My HERO..., Yes, you all are bravest, patriotic hero .... for me, and for us... and it is for ever.....
Me, our Kachin people and Our Mother Kachin land will never, every forget you.....
ရန်သူဘက်က လာတိုက်မှ ခုခံတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။
Amen amen the truth will set you free by doing the righ way and practical way .